विशेष आर्थिक क्षेत्रको आकर्षण | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार विशेष आर्थिक क्षेत्रको आकर्षण
on: February 15, 2018 पाठक विचार
विशेष आर्थिक क्षेत्रको आकर्षण
भैरहवामा सञ्चालन हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका १९ मध्ये ११ ओटा कम्पनीले मात्र उद्योग स्थापनाको अनुमति लिएको समाचार छ । यसले सेजप्रति उद्योगीको आकर्षण घटेको पुष्टि गर्छ । सरकारले सेजमार्फत उद्योग सञ्चालको जुन लक्ष्य राखेको थियो, त्यो नै धरापमा पर्ने पो हो कि ?
सेजमा जुन किसिमका पूर्वाधार तयार गर्ने सम्झौता भएको हो, त्यसअनुरूप हुन नसक्ने हो भने त्यसको स्थापना नै किन गर्नुप¥यो र ? उद्योग सञ्चालनको मुख्य आधार विद्युत् नै उपलब्ध नहुने भएपछि उद्योगीले किन अनुमति लिनु ? त्योभन्दा त आफूखुशी रूपमा जहाँ छन्, त्यहीँबाट सञ्चालन गरे भइहाल्छ नि ।
सेजमा सेन्थेटिक, हर्बल, फलफूल प्रशोधन, गार्मेण्ट, पीभीसी म्याट, जुत्ता, चाउचाउलगायत वस्तु उत्पादन उद्योगले अनुमति लिएको समाचार छ । सेज ऐनअनुसार सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत अंश निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राम्रै हो । सेजमा बन्द हडतालसमेत प्रतिबन्ध हुने हुँदा उद्योगीलाई फाइदा नै पुग्छ । तसर्थ सेजप्रति उद्योगीलाई आकर्षित गर्न कुनै नयाँ योजना ल्याउने पो हो कि ?